Ubuchwepheshe ezihlongozwayo isekelwe kucatshangwa ukuthi kungenzeka ukudala ukuthola ukukhetha neutrinos. I ukuthola isiqondiso ekhethiwe. Ukuze kuphakanyiswa ukucabangela ezimbili okukhethwa uzingela. Isiqondiso lokuqala - ukusetshenziswa ekhona scintillation imitshina nama-bubble chamber, futhi indawo yabo incane phambili isihlangu, ukuze ugweme ingxenye eyinhloko emisebeni yangemuva. Isici esiyinhloko - kuyinto ikhompyutha ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo amathrekhi abasafufusa, nokukhipha inyumbazane ngokuzenzekelayo zonke kodwa wasuka oxhumana izindawo olulodwa ezikhethiwe.
Okulandelayo - ngesisekelo umbono! Isexwayiso! Luhamba luye ohlangothini olulodwa, lapho i-computer ubala amathrekhi ngaphandle ekamelweni, perpendicular ke, itholakala Kuqondaniswe ulinganiswe ngenduku laser ngesikhathi wire phambili kuyinto abangamakhulu amaningana budze. It ngeke belingisa isivikelo idwala ukuze kusetshenziswe ucwaningo ezimayini ezijulile:
Yiqiniso, lokhu kuvikela kunikezwa kuphela isiqondiso ewumngcingo, kodwa misa umtshina izosebenza kuphela labo izinhlayiya ukuthi ayovela lesi siqondiso. Kuyaqondakala ukuthi ezindaweni ezikhethiwe kuyofezwa izinhlayiya kuphela - neutrinos.
I nguqulo ye umtshina yesibili kusekelwe nokucabanga, okudinga ezengeziwe ukulungiswa, ukuhlolwa kanye nophenyo. zesayensi Nuclear wazi ukuthi uma "ihlumela" core target "endaweni ebunzini" neutrino ecucuza, kuyenzeka anisotropy bamba cross-section, ngamanye amazwi, abakhethayo bamba kuphela indlela ethile. Kungenzeka ukusebenzisa la ma-athomu target (ion) esezohlanganisa iminyaka engu-ijubane, isibonelo ama-proton kusukela namafutha proton. Thina beat kuyizinhlayiyana ugongolo ebheke wire ekupheleni okuhola nawokwenza catch emhlabeni spectrum, nomkhakha we ngemisebe futhi isithombe amathrekhi ohambisana grippers neutrino target izinhlayiya. Amathuba ohlangothini grippers (ie, ukusebenzisana izinhlayiya ezihambayo ne transverse isiqondiso ugongolo) azinakwa, kanye nomkhakha we ukushayisana kuzoqoshwa njengoba umehluko. Active bamba indawo obuphelele kumelwe ube mkhulu, balwisana "inertness" neutrino. Mhlawumbe in a emashumini ambalwa amamitha ngobude. By the way, imitshina Hadron Super Collider e amashumi metres ubude. Selitholakala ngakho neutrinos kungukuthi nje wabanjwa, futhi ibanjwe isiqondiso ngokuqinile ezithile! Lena yi kubaluleke kakhulu, angasetshenziswa. Ngokwesibonelo, ukwenza ibalazwe neutrino solar umsebenzi idrayivu. Uma ukhetha isiqondiso ngocingo phambili bebheke ilanga, futhi wenze kokuma nsuku zonke, bese emva kwesikhathi esithize, idivayisi "prokartiruet" inhlamvu yelanga kumsebenzi neutrino.
Nasi isixhumanisi abonisa ukubaluleka nentshisakalo emhlabeni yesayensi okungenhla:
Borexino okokuqala ngithole solar ephansi amandla ..
Ososayensi base-international iphrojekthi Borexino, ukusebenza ngesisekelo Italian National Institute of ...
Kusukela link ahlinzekwa kungabonwa ngokucacile lokho umzamo omkhulu futhi kwemali esetshenziswe ucwaningo kule ndawo ...
Kuyacaca ukuthi intengo wanikela isikimu ngenhla izifundo izobiza umyalelo ezidlula ngaphansana ucwaningo neutrino lanamuhla. Akubalulekile ukuchitha zezigidi ilungiselelo imigede ezijulile komhlaba noma ukufakwa ekujuleni kolwandle ka imitshina ekujuleni kolwandle.
Idivayisi sizokwazi ukubeka isakhiwo we-Institute for Ngokwesibonelo, futhi lezi zifundo bazokwazi ukukhokhela amaqembu ucwaningo eziningana. Multiple izilinganiso kanyekanye laboratories ezahlukene oyokwakha ibalazwe ezintathu-ntathu of the kwasendaweni neutrino kwabantu ilanga. Map yangaphakathi foci neutrino odala yangokwesiko okuqhubekayo futhi ukuthola ezintsha - isivele ukuqapha umsebenzi solar. Futhi lolu lwazi olukhulu ukubaluleka ngokwesayensi. Phela, wayengakaze ephethwe ukubheka ngaphakathi isakhiwo sangempela plasma lezinkanyezi, ukuqonda ke yakhiwe njani. Lokhu ngeke kuphela ukuqinisekisa noma zingamanga eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma Cosmological, kodwa babuye basinikeze izibikezelo ngempela nokuqagela womsebenzi elanga!
Creative kuphrojekthi ubuchwepheshe izifundo